आसन्न निर्वाचन र वाम एकताको जनमत संग्रह ! - Naya Patrika
आसन्न निर्वाचन र वाम एकताको जनमत संग्रह !
जी भट्ट | असोज १९, २०७४
वाम एकताको बहस र तालमेलको घोषणालार्इ आसन्न निर्वाचनमार्फत् ‘वाम एकता’लाई ‘आम एकता’का रुपमा प्रमाणित गराउने स्वर्णिम अवसर बनेकाे छ ।
आकस्मिक र अनपेक्षित रुपमा सार्वजनिक भएको एकता बहस र तालमेलले एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्तिका जिल्ला र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्तामा अन्यौलता र आशंका हावी भएको छ । एकअर्कालाई होच्याउने र दुष्ट देख्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला एकाएक पार्टी नेतृत्वबाट पार्टी एकताको बहस र तालमेलको घोषणा हुँदा कार्यकर्ताले असहज महसुस पनि गरेका छन् । सँगसँगै एकता बहस र तालमेलको भविष्यबारे चिन्ता र चिन्तन भइरहेको छ ।
पार्टी एकता चुनावपछि हुने भएकाले तत्काल तालमेललाई सफल बनाउनु गठबन्धनका लागि महत्वपूर्ण कार्य हो । तालमेल सफल भए एकताको जग मजबुत हुनेछ । त्यसका लागि नेता कार्यकर्तामा देखिएको अन्यौलता, असहजता र आशंकालाई व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले के गर्छ ? यो सवालको जवाफसँग तालमेलमा इमान्दारिता र एकता बहसको मूर्तताको भविष्य जोडिएको छ ।
तालमेल र एकताको साइत
एमालेका नेता कार्यकर्तामा बढ्दै गएको दम्भले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई हेप्ने र माओवादीका कार्यकर्तालाई प्रतिरक्षा गर्न धौधौं परिरहेका बेला पार्टी एकताको बहस र तालमेलको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । द्वन्द्वात्मक अवस्थामा रहेका २ पार्टीबीच तत्काल कसरी तालमेल सम्भव हुन्छ ?
तात्तातो रुपमा व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रिया भविष्यभन्दा पनि विगतबाट निर्देशित छन् । तर, पार्टीहरूबीच भएको एकता र तालमेल भविष्यसँग जोडिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताले विगतको स्थिति र अभ्यासलाई त्याग्न नसकेका कारण वर्तमान र भविष्यलाई स्वीकार्न असहज भएको हो ।
पार्टीको मूल नेतृत्व मिल्यो भन्दैमा हिजोसम्म वादविवाद गरिरहेको कार्यकर्ताबीच देशैभरि कसरी तालमेल गराउन सकिएला ? यी प्रश्न स्वभाविक छन् । यिनै प्रश्नको सेरोफेरामा तालमेल र पार्टी एकताबारे आएका तत्कालिक प्रक्रिया गठबन्धनका लागि सकारात्मक छैनन् । तत्कालिक प्रतिक्रियामार्फत् एमाले कार्यकर्ताको दम्भ र माओवादी कार्यकर्ताको आक्रोश र असन्तुष्टि झल्किरहेको छ ।
तात्तातो रुपमा व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रिया भविष्यभन्दा पनि विगतबाट निर्देशित छन् । तर, पार्टीहरूबीच भएको एकता र तालमेल भविष्यसँग जोडिएको छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताले विगतको स्थिति र अभ्यासलाई त्याग्न नसकेका कारण वर्तमान र भविष्यलाई स्वीकार्न असहज भएको हो । तत्काल जेसुकै भइरहेपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै आइरहेकाले राजनीतिमा सक्रिय नेता कार्यकर्ताले केही दिनपछि भविष्यतर्फ सोच्नैपर्ने छ ।
वाम गठबन्धनले उज्ज्वल र सुरक्षित भविष्यको परिकल्पना गरिरहेकाले अन्ततः नेता कार्यकर्ता वाम गठबन्धनप्रति आकर्षित हुने नै छन् । तर, त्यो आकर्षण स्वतः हुने छैन । त्यसका लागि ३ वटै पार्टीका नेतृत्वले एकल र सामुहिक रुपमा पर्याप्त प्रशिक्षक र बहस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सतहमा आएका कुराभन्दा एकता कसरी सम्भव भयो ? एकता गराउन कसको हात छ ? एकतामा बाह्य शक्तिको हात पो छ कि ? एकता पछाडिको स्वार्थ के हो ? लगायत थुप्रै प्रश्न चर्चामा छन् । यी प्रश्नका पक्ष विपक्षमा जवाफ आइरहेका छन् । वाम गठबन्धनका पक्षपातिले कारण खोज्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
विगतका खराब कुरालाई कोट्याइरहने हो भने आगत अप्रिय हुन्छ । विगतमा भएका वादविवाद, द्वन्द्व र प्रतिवाद चटक्कै बिर्सेर सुन्दर भविष्य निर्माणमा केन्द्रीत हुनु वाम गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसको अर्थ विगतको प्रवृत्तिलाई सच्याउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन ।
विगतको प्रवृत्ति र दम्भलाई परित्याग गरेर सौहार्दपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखि माओवादीलाई हेप्ने बानी परेको एमाले कार्यकर्ता र प्रतिरक्षा गर्नमै व्यस्त रहेका माओवादी कार्यकर्ताले तत्काल स्थापित स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । तर, स्वभावलाई सुधारोन्मुख बनाउनु चाहिँ पर्छ ।
शरीर विज्ञानका अनुसार, मानिसका स्वभाव र बानीलाई परिवर्तन गर्न कम्तिमा पनि २१ दिनको समय चाहिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहने एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताका बानी परिवर्तन हुन कम्तिमा पनि २१ दिनको समय त लाग्ने नै छ ।
सँगसँगै पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका नेताको अभिव्यक्तिमा समेत तालमेलको आशय झल्किनु आवश्यक छ । तालमेलपछि पार्टी एकता हुने र नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने विषयलाई एउटा पार्टी अर्काे पार्टीमा प्रवेश ग¥यो भन्ने आशय व्यक्त गरिँदा कार्यकर्ताको असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ । तालमेल र एकताको मर्म विपरित अभिव्यक्ति दिँदा कार्यकर्ताको भावनात्मक लगावमा ठेस पुग्ने तथ्यलाई शीर्ष नेतृत्वले नकार्नु हुँदैन ।
वाम एकताको जनमत संग्रह
कम्यूनिस्ट आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिएको वाम एकतालाई आगामी चुनावको नतिजा मार्गनिर्देश गर्नेछ । तत्कालका लागि तालमेललाई कार्यान्वयन र एकता प्रक्रियालाई बहसमा लगिएको छ । वाम एकताको बहस ३ दलका नेता कार्यकर्तासम्म मात्रै होइन, आम मतदातासम्म पुगेको छ । नेपालमा वामपन्थी विचारधारा मान्ने मतदाताको बाहुल्यता रहेको वामपन्थी दलका नेताले समय–समयमा दावी गर्ने गरेका छन् । के साँच्चै नेपालमा वामपन्थी मतदाताको बाहुल्यता छ त ? चुनावको मुखमा भएको वामपन्थी ध्रुविकरण र तालमेलले यो प्रश्नको प्रामाणिक जवाफ दिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई वाम एकताका पक्षधरले जनमतसंग्रहका रुपमा समेत लिन सक्छन् । वाम एकतालाई बहुमत मतदाताबाट अनुमोदन गराउन वाम तालमेललाई सफल बनाउनु आवश्यक हुन्छ । वाम तालमेल सफल भयो भने वाम एकता जनमतसंग्रहबाट स्वीकृत भएको मानिने छ भने वाम तालमेल असफल भयो भने वाम एकता मतदाताबाट अस्वीकृत भएको मानिने छ ।
चुनावको मुखमा भएको वामपन्थी ध्रुविकरण र तालमेलले यो प्रश्नको प्रामाणिक जवाफ दिनेछ । वाम तालमेल सफल भयो भने वाम एकता जनमतसंग्रहबाट स्वीकृत भएको मानिने छ भने वाम तालमेल असफल भयो भने वाम एकता मतदाताबाट अस्वीकृत भएको मानिने छ ।
वाम एकताको भविष्य निक्र्यौल गर्न वाम तालमेललाई सफल बनाउने जिम्मेवारी ३ वटै दलका शीर्ष र स्थानीय नेतृत्व तथा कार्यकर्तामा आएको छ । आगामी निर्वाचन ‘वाम एकता’लाई ‘आम एकता’का रुपमा प्रमाणित गराउने स्वर्णिम अवसर पनि हो । तालमेलको नतिजा ३ वटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको साझा प्रयास र सक्रियतासँग जोडिन्छ । साझा प्रयास र सक्रियताका लागि राजनीतिक र दलगत तालमेलभन्दा भावनात्मक तालमेल र एकता आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सकारात्मक माहौल पार्टी नेतृत्वले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
सौद्धान्तिक समझदारी र संगठनात्मक संरचना
आसन्न चुनावबाट वाम तालमेल सफल बनाउन भए वाम एकताको जग मजबुत हुनेछ । वाम एकताभन्दा वाम तालमेल जटिल पाटो छ । वाम तालमेलको सुरक्षित कार्यान्वयन हुन सके वाम एकतामा खासै समस्या देखिने छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्दै आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादतर्फ लम्कने विषयमा ३ वटै पार्टी सहमत भइसकेकाले सौद्धान्तिक पाटोमा समझदारी बन्न धेरै समस्या देखिँदैन ।
केन्द्रीय नेतृत्वले सौद्धान्तिक र संगठनात्मक संरचनाको व्यवस्थापनका लागि सहजै खाका तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयन गराउन सक्ने छ । मुख्य कुरो निर्वाचनको साझा अभियानमा खटिने नेता कार्यकर्ताको भावनात्मक एकता हो । जुन अबका २–३ हप्ताभित्र भइसक्नुपर्ने छ । तब मात्रै वाम एकताको बलियो जग निर्माण हुनेछ ।